सूचना प्रविधि Archives - विवेचना
विस्थापित होला स्मार्टफोन ?
एक दशकसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी बिक्रीको रेकर्ड बनाएको स्मार्टफोनको ठाउँमा अब नयाँ कुन उपभोग्य वस्तु आउला ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर प्रविधि क्षेत्रमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । एप्पल र सामसुङजस्ता पहिलो श्रेणीका उत्पादकहरुले उपभोक्ताका लागि नयाँनयाँ विशेषतायुक्त स्मार्टफोन उत्पादन गरिरहे पनि पछिल्लो समय स्मार्टफोनको बिक्री घट्न थालेको पाइएको …
विपन्न २० जनालाई नि:शुल्क कम्प्युटर शिक्षा
बिर्तामोड, मंसिर १३ । वीरता जेसीज र बिर्तामोड एजुकसेन फाउन्डेसन (बिइएफ) को सहकार्यमा सञ्चालित विपन्न परिवारका २० जना विद्यार्थीलाई ६ महिने नि:शुल्क कम्प्युटर कक्षाको बुधबार समापन भएको छ । वीरता जेसीजको सचिवालयमा आयोजित समारोहमा कम्प्युटर शिक्षा कक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । वीरता जेसीजका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बिर्तामोड …
२७ मोबाइल टावर थपिँदै
इलाम, भदौ ७ । विकट पहाडी क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच नपुगेको गुनासो आइरहेका बेला मेचीका ३ पहाडी जिल्लामा २७ वटा नयाँ मोबाइल टावर थपिने भएका छन् । नेपाल टेलिकमले ३ जिल्लाका अत्यावश्यक स्थानमा एकैपटक यति धेरै टावार बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । टावर निर्माणका लागि टेन्डरसमेत भइसकेको छ । ३ कम्पनीले यी टावर निर्माण …
एनसेलले गर्यो दुरसञ्चार सेवा शुल्क समायोजन, नयाँ भ्वाइस तथा डेटा प्याक सार्वजनिक
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले मंगलबारबाट आफ्ना सम्पूर्ण मूल्यमा नेपाल सरकारले दुरसञ्चार सेवा शुल्कमा हालै गरेको परिमार्जन अनुरुप नयाँ दुरसञ्चार सेवा शुल्क दर लागु हुने घोषणा गरेको छ । नयाँ करको दर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एनसेलले विभिन्न सेवाहरुमा लाग्दै आएको कर अघिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । साथै डेटा …